Hawlgabka sawrirrada Fikradaha - Sida loo sameeyo a Good Hawlgabka sawrirrada
> Resource > Talooyin > Hawlgabka sawrirrada Fikradaha Making Hawlgabka sawrirrada
Hawlgabka waa tallaabo weyn ee nolosha qofka. Si aad ku qarisaan naftiina waqtiga shaqada ee la soo dhaafay iyo dabaal dulucdii xirfadda, sameynta sawrirrada ah hawlgabka waa fikrad wanaagsan. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fikradaha sawrirrada fariistay weyn u wanaagsan qaadashada sawrirrada fariistay.
Hawlgabka sawrirrada Fikradaha - Xusuuso Professional Guulaha
Samee sawrirrada fariistay si ay dib ugu eegto xirfadiisa hawlgab ee la sawiro iyo qoraal ah in mashaariic caan ah rikoor, guulaha la xiriira shaqada iyo abaalmarinta xirfadeed. Dhis Layouts muuqan nuqul ka mid ah shahaadooyin, commendations iyo laama wargeyska, tusaale ahaan. Weydii macaamiisha hore in ay ka qayb sawirada, shakhsi qoraalada aad ku mahad naqaan oo si fiican u rabo in uu ka mid pages ka mid ah.
Hawlgabka sawrirrada Fikradaha - Record Office Xusuusaha
Samee sawrirrada fiican in ay sii tiirarkii, dhacdooyinka iyo shaqsiyad in hawlgab ah ayaa seegi doona xafiiska. Layouts Design muuqan xasuus ka kulan ee shirkadaha, shirar iyo dhinacyada fasax. Photos sawrirrada agagaarka xafiiska sida qolka nasashada, goobta soo dhoweynta iyo albaabbadii hore. Wada saar "Maalinta nolosha" Layouts in ay diiwaan maalinta caadiga ah ee xafiiska, dhameystiran la sawiro iyo warqado ka maareeyayaasha iyo asxaabtaada.
Fikradaha Hawlgabka sawrirrada - Messages Document tiiraanyo leh
Soo saaridda album baad ah oo weydiiya saaxiibada, qoyska iyo dadka la shaqeeya, waayo, sawirada hawlgab ah, oo ay la socdaan hambalyo qoraal ah oo ku saabsan ka fariistay oo uu rabo mustaqbalka. Isku day qaybinta labajibaarane ee cardstock halkaas oo kuwa jecel yahay matihid kartaa farriin shaqsiyan in aad si fudud ku dheji karaa in Layouts sharooto laba dhinac.
Hawlgabka sawrirrada Fikradaha - qabsaday xisbiga hawlgabka ah
Samee sawrirrada ah in gaysteen ciyaaraha, cunto iyo jawi xisbiga fariistay. Sawir ka qaad co-workers iyo xubnaha qoyska riyaaqayaa cabitaanka, hadlaya hawlgab ama iska dhigaya la mid kale. Ku dar cardstock Caraabaah oo ka yar sawir kasta meesha maadooyinka sawirka qori kartaa caption kooban. Naqshad Sameynta Bogga jeebka by goosin ka mid ah cardstock bogga asalka sharooto laba dhinac ah kaalinta ay weheliyaan labada dhinac iyo hoose dhajinayaa. Isticmaal si uu u qabto ee mudud xisbiga, sida suufka oo gogo 'oo streamers, ka lalmisaa daah derbiga ama calaamadaha albaabka.
Hawlgabka sawrirrada Fikradaha - Fiiri in Mustaqbalka
Sii hawlgab ku saabsan sawrirrada diiwaan adventures uu la kulmi doonaa ciyaaraha ka fariistay. Ka dib markii bogga horyaalka oo ay ku jiraan sawiro jecel ee hawlgab ah, si fudud ka mid ah Layouts la Mats sawir banaan inay meel heerka 4-by-6 photos inch iyo bar madhan in lagu daro joornaal-style qoraalka. Layouts Design la embellishments Kiinteistö qarinaya danihiisa si noqon doonaa awoodo inuu sawirada iyo qoraalada ku daro ka dib markii dalxiisyada kalluumaysiga iyo fasaxyada ama dhamaystiran Layouts ku saabsan hiwaayadaha, fasaxyada iyo munaasabadaha qoyska.
Hawlgabka sawrirrada Fikradaha - horyaal u Hawlgabka sawrirrada
Ha ugu welwelina qabsatay Waxay Just oo qaraami ah Smiles
Koraaya Old waa qasab, Korriinka waa Optional
QABASHADA Back Years ayaa
Ma doonayo in ay koraan
Waxaan ahay Aan Old ... waxaan ahay Chronologically Hibada
Waa sahlan loo helo ka weyn u tahay in Hel sii xigmad badiya
Dhexe Age waa marka Broadness Of Mind iyo Narrowness Of The dhexda Change Places
In ka badan Hill iyo weli carar Wild
Quotes Hawlgabka hawlgabka sawrirrada
"Ninkeeda A fariistay inta badan waa shaqo waqti-buuxa ah naag ee." - Ella Harris
"Ha dhayalsan qiimaha Sameynta Waxba, ee ku teedsan aadayo, dhagaysto oo dhan wax ma maqli karaysaane, oo ma dhaafaan." - AA Milne
"Waxaan ka helaa u muuqatay oo aan haysan si ay u shaqo tagaan. Sidaas waan samayn saddex ama afar jeer maalintii." - Gene Perret
"Maturity period bilaabmaa marka aan raalli noqdeen inay noqdaan xaq ku saabsan wax aan helo, waxaa muhiim ah in la cadeeyo in uu qof kale waa qalad tahay." - Barbara Johnson
"Hawlgabka: Waa wax fiican inay ka soo Baxaan tartanka jiirka, laakiin waa in qofku u bartaan si ay u helaan oo ay la socdaan cheese yar .." - Gene Perret
"Waxaan hadda si xor ah sida neecaw ka ahay -. Leh qiyaas ahaan dakhliga la mid ah" - Gene Perret
"Ma aaminsani in gabowga. Waxaan ku rumaysan weligiis ku beddelaan kuwa arrin qorraxda." - Virginia Woolf
"Marka aad ka fariisto, aad iska badasho madaxda - mid ka mid ah oo aad loo soo kiraystay in mid ka mid ah kuwa aad guursan." - Gene Perret
DVD Muqaal dhise leeyahay sumcad sare ee samaynta curiyay sawir sida scrapbooks, kaararka, jadwalka iyo ka badan u Wedding, dhalashadiisa, safarka, qubeyska ilmaha, iyo ciidaha iyo dabaaldegyada kale ee aad la imaan karto. Si aad sawrirrada ah ka fariistay isticmaalaya sawiro, waxaad: